Ukuphupha Archives - Amaphupho Nezincazelo
Kusho Ukuthini Ukuphupha Ulwa? Ukuphupha ulwa uma kuza noma kukufikela ephusheni akuyona into enhle ngakho ke kufanele ulibhekisise leliphupho ukuthi lichazani. Kubalulekile ukuthi wazi ubulwa nobani noma nami ngesikhathi uphupha. Kungaba umuntu obulwa naye kodwa futhi kuyenzeka kube yisilwane njengenja noma inkomo. Ithini Incazelo Yaleliphupho? Njengoba sesishilo, kuya ngokuthi ubani lowo ophuphe ulwa naye. Incazelo … Read more